ကလိုစေးထူး: ဘုရားပွဲနဲ့ ကစားပွဲ…
you brought me back to my childhood inalittle town in Southern Burma. :)
Jan 16, 2008, 10:40:00 PM
တထောင့်တနေရာ ပြီးကတည်းက ကိုစေးထူးကြီးဆီက ၀တ္တုတိုတွေလာတော့မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်ဗျ :)
ဘယ်တော့ဖတ်ရမလဲလို့ စောင့်နေတာ ။စောင့်ရကျိုးနပ်တယ် အကိုရေ ။နောက်လည်း ၀တ္တုတိုတွေကို အလှည့်ပေးလို့ ရေးပါဦးဗျာ။
Jan 17, 2008, 1:11:00 AM
ရသမြောက်သလို၊ ဗဟုသုတလည်း ရပါတယ်။ ကျနော်တို့အညာဘက်မှာတော့ “ခြောက်ကောင်” ကစားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ မြွေ၊ဖား၊ငါး၊ပုဇွန်၊ဆင်၊လိပ် စတဲ့အကောင်တွေထင်ပါရဲ့။ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ငါးပေါ်ထိုးလို့ အံစာသုံးတုံးစလုံးက ငါးပေါ်ရင် သုံးဆရတာမျိုး။ အာ…ငယ်ငယ်ကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ကစားတာပေါ့။ ကိုယ်က မူလတန်းအရွယ်လေးဘဲရှိသေးတယ်။ သိပ်မမှောင်သေးခင် ထိုးသားသိပ်မလာသေးခင် ကိုယ်သွားကစားရင် ရှုံးသွားတောင် ဒိုင်က ပိုက်ဆံပြန်ထုတ်ပေးပြီး ကစားခိုင်းတယ်။ လူစည်လာအောင် ခေါ်တဲ့သဘောပေါ့။ နိုင်ရင် အမြတ်ကလေးကို အိမ်မှာ ပြေးထားလိုက်။ ရှုံးတဲ့အခါ ပြန်ပြေးယူလိုက်နဲ့။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ပွဲဈေးတန်းက မုန့်တောင်ဝယ်မစားရဘဲ ပါသမျှ တက်တက်ပြောင်တာ များပါတယ်။
Jan 17, 2008, 1:14:00 AM
ကျွန်တော်တို့ ရွှေဘို ဘက်မှာတော့ ဂလုံးဂလုံး ပဲ ခေါ်သဗျ :P
Jan 17, 2008, 2:52:00 AM
အကိုက ဒီလိုလဲ ရတာပဲလား :P
Jan 17, 2008, 3:04:00 AM
တခါဘူးမှ မကစားဘူးဘူး။ ကလိုရေးမှပဲ နဲနဲစိတ်ဝင်စားသွားပြီ။
Jan 17, 2008, 7:29:00 AM
Ko Glo Say Htoo,
It is great to read everything that you wrote in the past but I also would like to read the comment section so far that's is not successful yet. All I can see is the blocks when others write in Burmese. It would be more enjoyable reading it, if you could fix it. Thanking you in advance.
အလုပ်မရှိရင် ပို လောင်းကြတာပေါ့
များသောအားဖြင့် ပင်စင်စားတွေ အားလို့ လောင်းကြတာ
အလုပ်မအားတဲ့ လူတွေကတော့ မကစားအားပါဘူး
တရုပ်တွေ အလွန် လောင်းကစားသန်တယ်
ရန်ကုန်မှာ ၂ လုံးထီတွေ မိန်းမတွေသိပ်လောင်းတာဘဲ
ရဲစခန်းနဲ့ ဒိုင်နဲ့ ပေါင်းထားတယ်
အစိုးရ ဝင်ငွေရတဲ့ထီကို စိုးမိုးကျော်က လုပ်စားပြန်တယ်
Jan 17, 2008, 2:42:00 PM
ကိုစေထူးကြီးက စာရေးကောင်းတယ် အပိုအလိုမရှိဘူး
၀ထ္ထု တပုဒ်ကို ပီပီပြင်ပြင်ရေးသွားတာ။ နောက်ထပ်
Jan 17, 2008, 11:16:00 PM
Jan 19, 2008, 7:17:00 AM
ကိုစေးထူး...ဖတ်နေရင်းက မိစန်းကြည်ရဲ့ အံဂလုံခုံဘေးရောက်သွားသလို ခံစားရတဲ့ သရုပ်ဖော် နိုင်နင်းတဲ့ အရေးအသားကို နှစ်ခြိုက်မိပါတယ်။
Jan 21, 2008, 7:16:00 PM
ကျနော့် မိတ်ဆွေ မောင်နှမများ အခုလို အားပေးကြတဲ့ အတွက် ကျနော် အရမ်းကို ကျေနပ်ကြည်နူးမိပါတယ်။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် အခုလောက်အထိ အားပေးကြမယ်လို့တောင် မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်လို့များ အခု လက်ရှိရေးထားတာရော နောင်လာမယ့် ၀တ္ထုတွေမှာပါ ကျနော်ရေးထားတဲ့ အထဲက လစ်ဟာကွက်၊ လိုအပ်ချက်တွေများ ရှိခဲ့၊ တွေ့ခဲ့ရင် ထောက်ပြ ဝေဖန်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော် ကြိုးစားပါအုံးမယ်။
Jan 22, 2008, 8:04:00 PM